> Resource> iTunes> Olee naghachi ehichapụ ozi ederede site na iTunes ndabere faịlụ
Olee otú anyị pụrụ naghachi ozi site na iTunes ndabere faịlụ?
Mgbe ọ na-abịa naghachi ozi site na iTunes ndabere, nke kacha ụzọ na-na na-eweghachiri dum ndabere gị iOS ngwaọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike na-niile data azụ ngwaọrụ gị, gụnyere ozi. The prekondishion bụ na ọ dịghị mkpa data na ngwaọrụ gị, nke mere na ọ bụ OK ka overwrite ngwaọrụ gị site na-eweghachiri ndabere.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị pụghị ime ka a dịghachi na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na ị dị nnọọ chọrọ naanị azụ ozi site na nkwado ndabere na mpaghara, ọ bụghị ndị ọzọ data na ya? I kwesịrị ịgbanwe ụzọ:-eji ihe iTunes ndabere extractor. Na a na ụdị ngwá ọrụ, ị nwere ike wepụ keerughi iTunes nkwado ndabere na mpaghara ele nkọwa na ya. Mgbe ahụ selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ site na ya. Nke a bụ ihe ị chọrọ? Biko gụọ na ego ya na nzọụkwụ.
Selectively naghachi ozi ederede si iTunes ndabere
Dị ka iTunes ndabere extractor, i nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows). Ma nke ihe omume nwere ike inyere wepụ niile gị iTunes ndabere faịlụ (ewepu ezoro ezo ndị), na ka ị hụchalụ ọdịnaya nke ozi n'ihu gị naghachi ha. Ị nwere ike mezue dum na-arụ ọrụ nzọụkwụ abụọ, ọ dịghị nkà na chọrọ mkpa.
Naghachi ozi site na iTunes ndabere, ị na-adịghị mkpa Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. Dị nnọọ ẹkedori ya mgbe ị okokụre echichi. Mgbe ahụ ịgbanwee gaa na naputa site na iTunes ndabere File nhọrọ na n'elu nke isi window. Fọrọ nke nta n'otu oge, ị ga-ahụ na ihe omume ahụ hụrụ gị niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa na egosipụta ha n'ihu gị. Họrọ onye na ị chọrọ wepụ na pịa Malite iṅomi.
Nzọụkwụ 2. naghachi ehichapụ ozi ederede si iTunes ndabere
Doppler ga-agwụ agwụ na sekọnd ole na ole. Mgbe ahụ, ị nwere ike ihuchalu niile hụrụ ozi na iTunes ndabere faịlụ, gụnyere foto na vidiyo. Họrọ Ozi na n'aka ekpe nke usoro ihe omume ma ị nwere ike gụọ ozi ọdịnaya na zuru ezu. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.